Famintinana II Mametraka Party Jr | Avy amin'ny Linux
Famintinana II Mametraka Party Jr.
Eny, taorian'ny fitsaharana alina dia tonga ny fotoana hamintinana ny inona ny II Install Party Jr izay nitranga tao Madrid, Espana.
Raha vantany vao tonga tao amin'ilay hetsika aho ary naka ny lisitry ny hetsika, ny sarintany mifandraika ary mifandray amin'ny Wi-Fi, dia nankany amin'ny efitrano malalaky ny efitrano fisakafoana an-tsekoly izay misy ny faritra fametrahana, Android, Lalao ary Diagnostika ( raha sanatria simba ny pc anao) ary nivonona ny hilalao kilalao an-tserasera aho tao Openarena mandra-panombohan'ny lahateny izay hatrehiko.
Ary farany, tamin'ny 11 ora sy sasany maraina dia nankany amin'ny efitrano malalaky ny sekoly aho tamin'ny lahateny momba ny Myths and Realities of Free Software izay nomen'i David Muñoz, mpikambana ao amin'ny GUL an'ny oniversite Carlos III. Amin'ity lahateny ity aho dia miresaka momba ny zavatra maro izay eritreretin'ny olona momba ny Free Software, na orinasa sasany (* cofmicrosoftcof *) manandrana mampisaintsaina antsika, amin'ny fomba tena mampiala voly sy mahafinaritra.
Taorian'io lahateny io dia tonga ny iray momba ny Internet tsy nisy tahotra, nomen'i David ihany koa izay nanazavany ny loza mety hitranga amin'ny Internet sy ny fomba hisorohana azy ireo (phishing, virus, fangalarana tenimiafina, sns.) Izay nifarana tamin'ny fanolorana ho an'ny ray aman-dreny izay manara-maso sy mampianatra ny zanakareo amin'izany.
Taorian'ity lahateny ity dia nihaona tamin'ireo mpiara-miasa amiko izay nanatrika taty aoriana aho ary nanao fitsidihana fohy ny sisa amin'ireo atrikasa ary naka sary teny an-dàlana.
Ho famaranana farany dia nanatrika ny lahateny Android izahay, nomen'i Yago Rosa, mpikambana ao amin'ny Xataca Android izay nanazavany kely momba ny fananganana terminal iray (izay rahateo, ara-dalàna any Eropa), ny ROMS (miaraka amin'ireo raha very isika ny antoka), mpandefa ary widget.
Ny marina dia tena faly aho tamin'ity fanontana faharoa ity, na dia hitako aza fa tamin'ity taona ity dia vitsy ny olona nanatrika ny solosain'izy ireo hametraka Linux, feno ilay Android, indrindra ny famoahana finday, fametrahana na fanesorana apps na root. izy ireo.
Avelako miaraka aminao ny rakitsary misy sary, vitsy izy ireo, saingy tsy maro no ilaina.
II Mametraka Party Jr.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Famintinana II Mametraka Party Jr.
Hetsika mahaliana. Manantena aho fa misy bebe kokoa toy izao manodidina ahy 🙂
Manantena ary manao an'ity karazana hetsika ity eto amin'ny fireneko!
Mampalahelo fa tsy namaky ny lalao video niaraka tamin'i Blender ianao 😉
Tena tsy liana tamin'io atrikasa io aho. Tiako ny iray hafa avy amin'ny Phonegap ohatra.
Raha efa nahalala teo aloha aho dia efa nampahafantarina ahy ny momba ny fandehanana, arahaba avy any Madrid, Espana = (xD
Tsy dia mamaky anay loatra ianao satria niresaka momba azy aho 2 herinandro lasa izay XD
Fa kosa, fomba hafa filalaovana
Hanafaka an'i Ubuntu isaky ny roa taona ve i Canonical?